Ungayithuthukisa kanjani uhlu lwami lomkhiqizo e-Amazon ngokusesha igama?
Uhlu lwemikhiqizo e-Amazon kanye nezwi lokusesha cishe yizindawo ezimbili ezinkulu zokuncintisana kwakho. Ngisho ukuthi ikhwalithi yohlu lwakho lokuhlunga, incazelo yomkhiqizo kanye nesethi yamaphuzu e-bullet mayelana nokunikezwa kwakho - bonke bahamba ngokuzungezile kwesokudla kwamagama angukhiye nokusetshenziswa kwawo okufanele. Ngakho-ke, ungathatha umncintiswano ngaphezu komncintiswano e-Amazon ngezwi lokusesha eliphathwa ngendlela efanele. Futhi ngizokukhombisa izinketho eziningana ezinhle kakhulu ukuze ufinyelele ekucwaningweni kwegama eliyisihluthulelo e-ecommerce nokuhlelwa kokufakwa komkhiqizo.
Kodwa ngaphambi kokuba siqale, ngincoma ukuba uhlolwe kabili ukugwema okungenani izinkinga ezilandelayo:
Isihloko sokubhalisa, incazelo yomkhiqizo, futhi amaphuzu we-bullet awacebile ngamagama angukhiye nemisho emifushane ende.
Isigaba ngasinye esibonakalayo sibonakala sigcwele ngokweqile ngamagama angukhiye, ngaleyo ndlela yenza konke kunqotshwe - golden arch casino login.
Ukuba nenani elinganele lemifanekiso noma okuqukethwe okubonakalayo okubonakalayo (inothi lokuthi ngomfanekiso owodwa noma emibili ngomkhiqizo awusoze uthola kuphi - ake sibheke).
Ukulahlekelwa ulwazi olubucayi esigabeni ngencazelo yomkhiqizo noma inkambu yamaphoyinti.
Uma uqinisekisa ukuthi konke okukhona kuhlwini lwemikhiqizo yakho, sekuyisikhathi sokuthola amathuba athembisayo ku-Amazon ngokusesha amagama. Ngaleyo ndlela, kuzodingeka uthole isithombe esikhulu samagama angukhiye abalulekile asetshenziswe abancintisana abasondelene nabo. Ngakolunye uhlangothi, kunesidingo ukuqonda ukuthambekela kwangempela kwezwi le-Amazon ukuze wenze okuningi kwezicelo zomsila eside ezisetshenziselwa abathengi abaphilayo ngaphandle lapho. Nakhu ukuthi lawa mathuluzi we-software ewusizo wegama elingukhiye aqala ukudlala kanjani! Phakathi kokuhlukahluka okunezinhlobonhlobo zezindlela ezihlukile, ngingakwazi ukuncoma abasizi ababili abaxhumeke ku-intanethi ngokusebenza kahle okusebenzayo.
Ama-Merchant Words iyithuluzi elikhulu le-Amazon elithi search search. Kungakusiza uqhubeke nokuthuthukisa amakhasi wakho womkhiqizo ukuze afane nezicelo zangempela ze-shopper. Ekugcineni - ukuboniswa phezulu kokusesha okufanele. Zama Ama-Merchant Words ukuze uqonde kahle ukuthi yimaphi amagama abenezinombolo zokusesha eziphakeme kakhulu ukuthi uzivumelanise nazo. Qaphela ukuthi le nketho iklanyelwe ngqo amapulatifomu e-ecommerce kanye nebhizinisi lokuthumela phansi ngokuthumela ngokukhethekile. Phakathi kwezinhlangothi zalo ezinamandla kakhulu, ithuluzi liphinde liqoqe amagama angukhiye asetshenzisiwe hhayi nje ku-Amazon ngokwayo kodwa iqoqa imishwana esetshenziswa phezulu kusuka kwezinye izindawo njengeJet neWalmart.
Ububanzi bungaba umngane omuhle wabo bonke abathengisi abathengisayo e-Amazon. Okungaphezulu - leli gama eliyisihluthulelo kanye nethuluzi lokucwaninga lomkhiqizo libonisa amandla ayo okugcina uma udinga ukuqonda okuncintisana kakhulu. Ngokumane, Ububanzi bungakusiza ukuthi ubone okungcono kwamagama angukhiye aphezulu kanye nemishwana yokusesha abadayisi abahamba phambili ezingeni le-Amazon. Ngesikhathi esifanayo, leli thuluzi lingakubonisa ukuthi kungenzeka wenze amagama angukhiye anikeze ukusikisela okusemqoka kumazwi angokhiye abathandwayo mhlawumbe kufanele uqaphele ngokuqondile isikhathi. Ububanzi bubuye bube nesici esiyingqayizivele se-inbuilt evumela ukuthi kulungiswe imikhankaso ye-PPC ukuze isebenzise isilinganiso sabo esiphezulu sokwenza. Ngakho-ke, unganqikazi ukuzama bese ubona ukuthi yiziphi izinhlayizi ezilindele nje uhlu lwakho lomkhiqizo oluhle kakhulu. Ngikufisela inhlanhla!